တရုတ် Qingdao CO-NELE Group မှ - စနစ်တကျချကွန်ကရစ်စုပ်စက်ယူရန်သင့်အားအနည်းငယ်လှည့်ကွက်သှနျသငျ
ပိုက်ချသောအခါထိုအကွံကွန်ကရစ်စုပ်စက်ပိုက်ကြီးမားသည်၏သောအခါ, ကွန်ကရစ်တစ်သယ်ဆောင်ပိုက်၌အချည်းနှီးသို့မဟုတ်ကြောင့်မှ segregated ခံရဖို့ကွန်ကရစ်ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စေတဲ့, ထိုငျးရှိုပိုက်လိုင်းအတွက်အောက်ဖက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ကြောင့်စီးဆင်းစေခြင်းငှါ Self-စီးဖြင့်သယ်ဆောင်ပိုက်ပိတျဆို့နတေဲ့ခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေ။ ဒီကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့, အောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များယူနိုင်ပါတယ်:
1. ကွန်ကရစ်ချချပေးတဲ့အခါ, ကွန်ကရစ်ရဲ့ Self-စီးဆင်းမှုနီးကပ်စွာယင်း၏အခုထက်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ရေကွန်ကရစ်ချပေးမတိုင်မီ pumped ရပါမည်, တံဆိပ်ခတ်စိမ့်ရေမသေချာ, အဲဒီနောက်ပိုက်ချောဆီနှင့် The ဝေဟင်ဆေးရုံကဆင်းနေသည်တစ်ချိန်တည်းမှာဖို့မော်တာစုပ်စီပိုက်များ၏အဆစ်စစ်ဆေးပါ။
2. ပိုက်၏အကွံ4°ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်တဲ့အခါ -7 °သည်ဒေါင်လိုက်တစ်စက်ထက်ပို5ကြိမ်၏အရှည်မှသက်ဆိုင်ရာတစ်ဦးအလျားလိုက်ပိုက်အဆိုပါ downwardly နာမယူဘဲပိုက်၏ရှေ့ဆုံးနှင့်ကိုယ်ပိုင်မှာပေးအပ်ရပါမည် ကွန်ကရစ်၏စီးဆင်းမှုပွတ်ခံများကတားဆီးနိုင်ပါသည်။
Qingdao ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားစျေးနှုန်း (4)
ပိုက်အကွံပုငျးရှိုပိုက်၏အရှေ့ဘက်အဆုံးမှာ5ကြိမ်အရှည်ထား၏အလျားလိုက်ပိုက်အပြင်တစ်ဦးအိပ်ဇောအဆို့ရှင်ကျပိုက်၏အထက်ပိုင်းအဆုံးမှာထောက်ပံ့ပေးသင့်ပါတယ်°7° -12 ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်တဲ့အခါ 3. ။ အဆိုပါရှိုပိုက်လိုင်းတစ်ဦးလိုင်လည်းမရှိလျှင်ရှိုပိုက်လိုင်းကွန်ကရစ်နှင့်ပြည့်စုံသည်နှင့်အအိပ်ဇောအဆို့ရှင်ဟာအင်္ဂတေခြင်းသည်အလွန်များပြားသောအခါ, အိပ်ဇောအဆို့ရှင်ပိတ်ထားသည်နှင့်ပုံမှန်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဖျော်ဖြေနေသည်အထိမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသည်, အိပ်ဇောအဆို့ရှင်ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်ထားရမည် ။
4. ကြီးမားတဲ့တစ်စက်နှင့်အတူအောက်ဖက်ပိုက်တစ်ဘရိတ်အဖြစ်ပြုမူတဲ့မှတ်တိုင်ပိုက်တပ်ဆင်ရန်ဒေါင်လိုက်အောက်ဖက်ပိုက်၏ဗဟိုတွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ မော်တာ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့မော်တာချပေးမတိုင်မီအများအပြားခက်ရေမြှုပ်ဘောလုံးသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးပလပ် Insert ။ သူတို့ကမော်တာ၏အလေးချိန်ကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုက်အခြေအနေများအားဖြင့်ကန့်သတ်အခါအောက်ဖက်ရှိုပိုက်၏ရှေ့ဆုံးတွင်အလျားလိုက်ပိုက်စီစဉ်ရန်လုံလောက်သောအာကာသမရှိသည့်အခါ 5. သည်, ရေပိုက်, တံတောင်ဆစ်သို့မဟုတ် annular ပိုက်အဆိုပါပွတ်ခံတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အစားသုံးနိုငျ ပိုက်အပိုင်းအတွက်အောက်ဖက်စီးကနေ။
Qingdao ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားစျေးနှုန်း (6)
သို့သော်မသက်ဆိုင်ကွန်ကရစ်စုပ်စက်အထက်သို့သို့မဟုတ်အောက်သို့ချိတ်ဆက်ရှိမရှိ၏ကွဲပြားခြားနားသောပိုက်၏အလျားလိုက်ပြောင်းလဲခြင်းအရှည်, အမှန်တကယ်မတူညီတဲ့ပုံစံများကြောင့်ပိုက်, နံပါတ်များနှင့်ပိုက်များ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အတွက်အမှန်တကယ် conveying အကွာအဝေးနှင့်အမြင့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြရာ တွက်ချက်မှုအဘို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အလျားလိုက်အရှည်သို့ conical ပြွန်, တံတောင်ဆစ်, ရေပိုက်, ဒေါင်လိုက်ပြွန်အထိဒေါင်လိုက်ပြွန်ကိုဆင်း, etc အစားထိုးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ထိုအလျားလိုက်စာရင်းကိုင်တန်ဖိုးကိုကိုလည်းကွန်ကရစ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောသည်ပိုက်အချင်းများနှင့်ဒါပေါ်မှာ။
Post ကိုအချိန်: နိုဝင်ဘာ-21-2019